आफ्ना बच्चालाई अरूसँग नदाँजौँ ! हरेक अभिभावकले एकपटक पढौँ – Nayadhar
बिहिबार, जेठ २३, २०७६ | २०:४०:१८ |
अभिभावक भन्छन्– नानी साह्रै बिग्रियो । सकिनँ मैले । टेर्दै टेर्दैन । हेपिसक्यो । लौ न सर, सम्झाइदिनुपर्‍यो । तँलाई पख्, म बाबालाई भनिदिन्छु । पढ्न बसिस् ? कत्ति खेलिराखेको ? छिटो होम वर्क गर् । म त हैरान भएँ । फलानो कति मजाले पढिराखेको छ । उसलाई पढ् भन्नै पर्दैन । हाम्रो त कत्ति भन्दा पनि हुँदैन । फलानो फस्ट हुन्छ रे । तेरो खोइ प्रगति ?
बालकको भविष्य निर्माणमा आमाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उसलाई जन्माउन, हुर्काउन र बढाउन अमाले सारै कष्ट सहनुभएको छ । ऊ जन्मनुअघि र जन्मेपछि तपाईंले ठूलो सपनादेख्नुभएको छ । बीच बाटामा अलमलिएकोयात्री जता बाटो देखाइदियो, त्यतै जान्छ । उसलाई सही र गलत बाटाको ज्ञान हुँदैन । बालक बीच बाटामा अलमलिएको यात्री हो । उसलाई कस्तो बाटो देखाउने भन्ने कुरामा अभिभावकले ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ ।